पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसंग निर्वाचन गतिविधि सम्बन्धि गरिएको संक्षिप्त कुराकानी
स्थानिय तहको निर्वाचन आउनै लाग्दा देशैभर चुनावी चहलपहल तिब्ररुपमा भइरहेको छ । २० वर्ष पछी आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि दलहरुले आ–आफ्ना उमेरद्वार खडा गर्न थालिसकेका छन् । गएको फाल्गुण २७ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछी देशैभर नयाँ संरचना तयार भएका छन् । मोरङमा एक उपमहानगर सहित आठ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका बनेका छन् । जस मध्ये साविकमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका रहेकामा हाल हसन्दह गाविसलाई पनि गाभेर १० वटा वडामा विभाजन गरी पथरी शनिश्चरे नामाकरण गरिएको छ । हाल देशैभर रहेका प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निर्वाचन कार्यलय स्थापना गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । यस्तैगरी पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा पनि चहलपहल तिव्र रुपमा देखिएको छ । अब प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसंग निर्वाचन गतिविधि सम्बन्धि गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः
यो २० वर्ष पछाडी स्थानिय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वचनमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले कस्तो खालको तयारी गरिरहेको छ ?
निर्वाचन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम अनुसार पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा पनि निर्वाचन कार्यालयले तोकिएको निर्वाचन अधिकृत आइसक्नुभएको छ । मोरङ जिल्लाका १७ वटै स्थानिय तह हरुमा यही वैशाख ८ गते शुक्रबारका दिन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुदैँछ सोही अनुसार पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा पनि निर्वाचन कार्यलयको स्थापना हुन्छ । त्यस पछाडी निर्वाचनको तयारीका क्रममा हाम्रो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु भइ सकेको छ, मतदान केन्द्रहरु तोकिइ सकेको छ र अहिले तत्कालको अवस्थामा मतदाता शिक्षाका लागि स्वंयम सेवकहरु गाउँ गाउँमा परिचालित भइसकेका छन् ।
यो निर्वाचनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अलिकति चुनौतिपूर्ण जस्तो पनि देखिन्छ । सुरक्षाको हिसाबले कस्तो खालको अवस्था छ ?
पथरी शनिश्चरेको हकमा कुरो गर्दा खेरी स्थानिय निर्वाचन भनेको प्रत्यक्ष सुरक्षासंग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर पथरी शनिश्चरेको हकमा यहाँको अवस्था सामान्य भएकाले त्यति धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था देखिदैन् ।
सुरक्षाको हिसाबले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नभएता पनि केही चुनौतिहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता चुनौतिहरु के के हुन सक्छन् तपाइको बिचारमा ?
चुनौति भनेको निर्वाचनमा हामिले आँकलन गरेका खालका भन्दा फरक पनि हुन सक्छन् । समग्रमा निर्वाचन सुरक्षाको लागि केन्द्रको निर्देशनमा जिल्ला स्तर र स्थानिय स्तरमा सुरक्षाकर्मीहरु रहेका हुन्छन् । समग्रमा कुरा गर्दा नेपाल जनपथ प्रहरी र म्यादी प्रहरीले मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्नेछन् । त्यस पछी त्यो भन्दा बाहिरको घेरामा सशस्त्र प्रहरी र त्यो भन्दा बाहिरको घेरामा नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरा रहने प्रबन्ध मिलाएको छ र सोही अनुसार मोबाइल सक्युरिटी टिमहरु रहनेछन् र उमेरद्वारको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षा र कर्मचारीको सुरक्षा यी तिनै कुराको सुरक्षाको विषयलाई केन्द्रिकृत गरेर मोरङ जिल्लाको सुरक्षाको रणनीति बनाइएको विषय पनि जानकारीमा छ र जिल्ला स्तरिय सुरक्षा संयन्त्र टोलिले पनि हाम्रो क्षेत्रमा आएर छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
यो आउने निर्वाचनका लागि स्थानिय दलहरुसंग नगरपालिकाको सहकार्य कस्तो रहेको छ ?
पथरी शनिश्चरेका राजनैतिक दलहरुसंग निरन्तर छलफल र समन्वयमा छौँ । स्थानिय स्तरको मतदाता शिक्षा समन्वय समिति गठन भएको छ । नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत संयोजक र राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सदस्य तथा सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ जुन हामिले यही वैशाख ६ गते गठन गरी सकेका छौँ र आज अहिले भरखरै मात्र पनि राजनैतिक दलहरुसंगको बैठक सकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको उपस्थितिमा नै हामिले छलफल गरेका छौँ । राजनैतिक दलका प्रमुखहरुसंग निरन्तर समन्वय र सम्पर्कमा छौँ र भोलि वैशाख ८ गते सबै राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मीहरु सहितको उपस्थितिमा निर्वाचन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै छौँ ।
लामो समय पछाडी स्थानिय तहको चुनाव हुँदैछ । स्थानिय स्तरमा मानिसहरुको चुनाव प्रतिको जागरण÷चासो कस्तो पाउनुभएको छ ?
वास्तवमै भन्ने हो भने जनताले चाहेको निर्वाचन भनेको यो निर्वाचन हो । अहिले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि भनेको नेपालको विकासको मुहार फेर्नका लागि निर्वाचित हुने हो । देशैभर ७ सय ४४ वटा स्थानिय तह नयाँ संरचना अनुसार रहेका छन् । साचैँ एक तरिकाले भन्ने हो भने स्थानिय सरकार वा स्थानिय स्तरमा सिंह दरबारको सुबिधा ल्याउने कुरा हो । अहिले बनेका नयाँ संरचना भनेको विकासको पहिलो खुड्किलो हो । यो निर्वाचन कर्मचारी र राजनीतिक दलका लागि भन्दा पनि जनताका लागि महत्त्व र चासोको विषय भएको छ । मलाइ लाग्छ तापाइ हामी जस्ता युवा पुस्ता जस्ले स्थानिय निकायको चुनाव हेरेका थियौँ २०५४ सालमा अर्थात आज भन्दा २० वर्ष अगाडी भएको थियो र त्यस बेला जन्मिएको मान्छे अहिले उमेरद्वार हुदैछ । त्यसैले पनि सबैको एकदमै चासोको विषय हो । राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा केही असहमति भएका विषयहरु पनि होलान तर समग्रमा भन्ने हो भने निर्वाचन निर्विग्न र जनताको र सबै राजनीतिक दलको सक्रियतामा सम्पन्न हुने मैले पाएको छु ।
अन्त्यमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको र आफ्नो तर्फबाट नगर वासीहरुलाई के शन्देश दिनुहुन्छ ?
यो निर्वाचन हामी सबैका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र बनेर आएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिले हाम्रो सुरक्षा एकदम मजबुद रहेको छ । उमेरद्वारको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षा र कर्मचारीको सुरक्षामा कुनैपनि कमी आउन नदिन भरमक्दुर प्रयास भएको छ । मतदाताहरुले एकदमै सुरक्षित, मर्यादित र स्वतन्त्र ढंगले मतदान गर्न पाउने गरीको व्यवस्था मिलाउने तयारी छ । मतदान सम्बन्धि केही दुबिधाहरु हटाउनका लागि मतदाता स्वयम् सेवकहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाजका मानिसहरु लागि पर्नु भएको छ । सकेसम्म पथरी शनिश्चरेमा अत्याधिक मत खस्न सकोस स्वतन्त्र र निश्पक्ष ढंगले निर्वाचन होस । जनताले चाहेको प्रतिनिधिले आगामी जेठ महिनाको सुरुवात संगै नेतृत्व लिइयोस भन्ने कामना छ र सबैलाई अनिवार्य मतदान प्रक्रियामा सहभागि हुन आग्रह गर्दछु ।
,्निर्वाचन तयारी,निर्वाचन गतिविधि र निर्वाचन सुरक्षालगायतका बिषयमा रतुवामाई नगरपालिका प्रमुख युवराज आचार्यसँग गरिएको कुराकानी ः
Opening : Sunakhari Song
Time: 05:00- 05:06
BBC Bihani pakha
Time: 08:00- 08:20
Samridhika Lage Sajhedari
Sathi Sanga Manka kura (re.)
Sunakhari Sangit (Old)
BBC Nepali (Sanjha Pakha)